» प्रधानमन्त्रीको नातावाद र व्यक्तिवादले नेकपाको अन्त्य हुने निस्चित छ!:-पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्रीको नातावाद र व्यक्तिवादले नेकपाको अन्त्य हुने निस्चित छ!:-पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे – हाम्रो खबर
प्रधानमन्त्रीको नातावाद र व्यक्तिवादले नेकपाको अन्त्य हुने निस्चित छ!:-पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
चितवन,। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादले नेकपा समाप्त हुने बताएका छन् ।
नेता पाण्डेले पार्टीको निर्णयविरुद्ध काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले वर्तमान विवाद सृजना गरेको बताए । उनले गलत कार्यशैली, पार्टी र सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणको विरोध गर्ने बताए ।
पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने र एकलौटी तरिकाले सरकार चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले नेकपा कमजोर बन्दै गएको र प्रधानमन्त्री सच्चिनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
नेता पाण्डेले शुक्रबार पुर्वी चितवनका विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ता भेला गरेका थिए ।तर, जिल्लामा नेता पाण्डेको चर्को विरोध समेत भएको छ । नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताले गुटगत भेला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको भन्दै पाण्डेको विरोध गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको भेला भनेर पार्टी निर्माणमा योगदान दिएका अग्रज नेता तथा कार्यकर्ताबिना गुटगत भेला गरेको ओरोप उनीमाथि लगाइएकाे छ ।न्युज24 बाट